Dumarka ugu siil macaan (Halkaan Ka Baro) - iftineducation.com
aadan21 / December 21, 2014
iftineducation.com – Shabakaad Gaaloos.com aaya ku siineysa talooyin muhiim ah marka la joogo smaeynta kulanka naxariista leh ee labada lamaane ee gaabryaheey talooyinkaan samee si aad u hesho kulan degan oo dhameystiran.
1- Waxad Ka Yeeshaa Mid Ku Arkaya : ha u maleyn in daminta nalka inta lagu jiro ciyaarta in ay ninka ugu filan tahay in uu raaxo helo , ogoow hadii uusan ku arkeyn raaxadadaas waa dameysaa .
Dhanka aragga ninka aad ayay muhiim ugu tahay hadaba gabaryaheey waxaad xoogga saartaa in uu ku arko , haka wel welin muuqaalka jirkaada .
Haddii aad tahay haweeney xishood badan ka hor inta aadan nalka damin sii shid shumac oo weydii in uu doonayo in shumaca dhankaada xajiso si uu ku arko dhab ahaantii haa mooye wax kale kuma jawaabayo , hadaba hadaadan aheyn noocaas maxaa diidaya in aad dharka ku hor siibatid si degan dhab ahaantii waxaad arkeysaa isaga oo kuu faruuryo qaniinsanaya .
2- Noqo Qof La Maqlayo : kaliya luqada jirka kuma filna qancinta ninka ee codkaada ugu muuji raaxada , u muuji in aad dooneyso , weydii dareenkiisa oo hadaad macaanka daremeysid cod ahaan ugu muuji balse yeesan kaa noqon mid gacan ku rimis ah taasi kalsoonidiisa ayaad ku weyneysaa .
Marka ciyaarta dhaamato weydii sida raaxada
uu u dareemayay iyo sida aad adiga aheyd xitaa kulankaas hadii uusan si wacan kuu qancin hadana dhiira gilin ayuu ka qaadayaa oo kulanka kale waad ilmeyneysaa .
3- Baashaali Oo Xayaasiyada Ku Kici : ha iloobin in aad adiga baashaaliso ninka , meelaha uu ka jilicsan yahay ka daliig tani macaan ayuu ka qaadayaa mid laba jibaaran ayuu ku dhadhansiinaaya adna , xitaa fikir oo qaab uusan waligaa kuu baashaalin u baashaali .
4- Mararka Qaar Hogaanka Qabo: haka sugin isaga kaliya in hab cusub oo ciyaarta keeno oo isku day in habab cusub keento oo raaxada ah oo hogaanka adiga qabo in aad isaga hoos mariso ka dib indho sarcaad ku rid , marka qolka jiifka soo gashaan ka siib dharka adiga .
5 – U Noqo Haweeney Cusub : marba hab ugu muuqo oo ha dareemo in uusaa hal xaas kaliya qabin , dharka jiifka marba nooc gaar ah u xero , timaha marba hab ka dhig , muqalkaada kala bad badal .
OGOOW:-Dumarka ma jecla ragga guskooda ween yahay xog
wasmada guska yar iyo qaab aad ku qancin karto xaaskaaga oo laguu haayo?